Lammaa Magarsaa: ''Injifannoon argame kan aarsaa lammiileetiin dhufeedha'' - BBC News Afaan Oromoo
Image copyright Oromia Medisa Network
''Injifannoon amma argame kunis kan aarsaa lammiilee olaanaan argame waan ta'eefu itti fufiinsuun obsaafi beekumsaan hojjachuu barbaada'' jedhaniiru Obbo Lammaa Magarsaa Pirezidaantiin MNO.
Obbo Lammaan haasawa kaleessa sirna eebba baniinsa waajjira OMN damee Finfinnee galma barkumeetti qophaa'ee tureerratti taasisaniin, kanaan booda kaayyoon qeerroo inni mummeen misoomaa fi badhaadhinaaf hojjachuu ta'u qabaata.
Akkasumas Jawaariin dabalatee lammiilee hedduun mirgaafi bilisummaa ummataatiif jecha biyya baqannaan jiraataa turan irraa amma gara Itoophiyaatti deebii'uun naannicha waliin hojjachuuf murteessuun isaanitiif galateenfamu akka qabaatanis dubbataniiru.
Namoota qabsoon ummataa ija akka godhatuuf gumaata olaanaa taasisan keessa Jawaar dursaan kan eeramu waan ta'eef galateenfachu qabnas jedhaniiru Obbo Lammaan.
Obbo Jawaar Mahaammad daareektara Olaanaa OMN gama isaanitiin, ''Sirna nuuf hintaane diiguudhaan addunyaatti agarsiifneera. Amma kan nu hafee nagaa buufnee sirna dimokraasii ijaarree addunyaatti mul'isuudha.
Kanaafuu yaa qeerroo tokkommaa keessan cimfachuun injifannoo argamee eeggachaa waliin misoomaafi nageenyaa haa hiriiru,'' jechuun waamicha taasisaniiru.
Akkasumas tokkummaan waan qabsoofneef injifannoon golabu dandeenyu iyyu hundumtu xumurame jechuu akka hintaane qeerro yaadachisuun, boqonnaa qabsoo itti aanu ammo injifannoofi taayitaa argamee kana iddi itti qabsiisu ta'as jedhaara.
Kana malees boqonnaan itti aanu kan Oromiyaa madda misoonaafi nageenyaa akkasumas madda dimokraasii isa durii sanatti deebiisu ta'u qabas jedheera.
Kana dhugoomsuuf ammo Oromiyaa tasgabbeessuu, olaantummaan seeraa akka hinsharafamne eegu barbaachisa kan jedhe Obbo Jawaar, Oromiyaa harkatti galfannee eegachuun oggnsa dhaggeefachuun barbaachisaa ta'as jedheera.
Qaamooleen oggansaa kanneen qeerroon kubbaa harka diinaatii fuudhee itti kennee goolii galchuun bu'aa eegamu galeessuuf bakka hedduutti addaan cicituun osoo hintaane tokkoommaa cimfachuu fi uumata qaruun sochoosu akka qabaatanis dubbateera Obbo Jawaar.